I-China iiglavu zomsebenzi wesikhumba kunye neiglavu zomqhubi kunye neenkomo zokwahlula isikhumba somthi wesundu kunye nabathengisi | Joysun
Umsebenzi weenkomo zeCow Grain kunye neeGloves zoMqhubi ngeCow Split Leather Palm Patch
Inombolo yomzekelo: DCAKR
Isixhobo: isikhumba seenkomo esikhethiweyo.
Igama leMveliso: Iigusha zeGrain Umsebenzi weSikhumba kunye neeGloves zoMqhubi ngeCow Split Leather Palm Patch
I-Keyworkds: Umsebenzi weeYadi, ukuqhuba iMotocycle, Ukulima, uKwakha, Ukulungisa iThango, ukuThutha, Umsebenzi oMninzi, ukusika iinkuni, indawo yokugcina izinto, inkampu, iRanch / iFama, ukuLungiswa komhlaba, iDiy, iGaraji, Ukuhamba, iWelding, Ukugaya, ukugawula, ukugoba, ukumba kunye nawuphi na umsebenzi onzima okanye wangaphandle.
Amandla okubonelela: Iipesenti ezingama-10 000 ngenyanga
Umbala weMveliso: igolide
Imilinganiselo: 25CM / 10 intshi ubude
Isixhobo: isikhumba seCowhide esikhethiweyo, uqhekeko lwesikhumba olomeleze intende
UKUQHUBA OKUQHELEKILEYO: Isikhumba sokwenyani se-100% -Senziwe kwisikhumba esikhethiweyo esikumgangatho ophezulu weenkomo kunye ne-1.2mm enobunzima obungagungqi kuphela kwaye bomelele kodwa buthambile kwaye bulungile. Isundu lesibini lesikhumba sokuqina okuzinzileyo. Ilungele ukwakhiwa rhoqo, ubuchule, ukugcinwa, ukuqhuba, ihlathi, ukufuya, ukulungisa umhlaba / ukulima, izixhobo zesandla kunye nemisebenzi ye-DIY.
UKUQHUBEKA UKUNXIBA: Uyilo lwesihlakala selastiki luya kugcina ubumdaka kunye nenkunkuma ngaphandle kwegloves, kwaye ngaphakathi bekungayi kuhlaba isandla, ikunika amava endalo kunye nokuguquguquka.
UKUSIKWA KOMBANE KUNYE NESIQULATHO SOKUYILA: Ezi glavu zisikiweyo zinokuqina okuphezulu kunye nokuguquguquka kuba iiseti zibekwe ecaleni kwesundu.
Iimpawu zeglavu kunye nomgangatho ogqwesileyo kwenza ukuba kube luncedo kwiYard, ukuqhuba iMotocycle, Ukulima, uKwakha, ukulungisa iTango, ukuThutha, ukuSebenza okunzima, ukusika iinkuni, indawo yokugcina izinto, inkampu, ifama / ifama, ukuLungisa umhlaba, iDiy, igaraji, ukuhambisa, iwelding, ukugaya , Ukucanda, ukugoqa, ukumba, nawuphina umsebenzi onzima okanye ongaphandle.
Isikhumba sengqolowa yenkomo
Ubungakanani obukhulu beXL
0.30kg / isibini
26 * 14 * 3cm / isibini, 10pairs / ingxowa opp
Egqithileyo I-Cotton Canvas Knit yoKhuselo loMsebenzi iiglavu ezinamachaphaza amnyama ePVC
Okulandelayo: Iiglavu zohlobo oluqhelekileyo ezimhlophe / orenji
Iiglavu zokuqhuba zesikhumba i-DPAK
Heavy Duty Safety Iziqhano
Iiglavu zomsebenzi wesikhumba zeDCBKN zamadoda
DCBSB isikhumba iiglavu ukuqhuba
Iiglavu zesikhumba zomqhubi weDCASF